online မင်းသား: 2013
Google homepages နောက်ခံပုံအလန်းလေးတွေ
online တို.နေစဉ်သုံးနေတဲ့ Google homepage ကအဖြူထည်ကြီးဆိုတော့ သိပ်မလန်းဘူးလို.
online ထင်မိပါတယ်..ဒါကြောင့်အဲလိုထင်ကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် နောက်ခံပုံအလန်းတွေ
သူငယ်ချင်းတို.ကြိုက်တဲ့ ပုံလေးတွေကိုရွေးပြီး လန်းလိုက်ကြရအောင်နော်...
အရင်ဆုံး ဒီနေရာလေးကို သွားလိုက်ပါ..
လုပ်ပုံလုပ်နည်းကိုတော့ online ကအောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ.ပြထားပါတယ်..
ကဲ..ဒီလောက်ဆိုရင် အဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို. online မျှော်လင့်ပါတယ်..ပျော်ရွှင်ကြပါစေ...
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 06:13 No comments:
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်းတို. ..မတွေ.တာကြာပြီနော်..online လည်းပို.စ်မတင်တာကြာသွားတယ်...
အဲဒီအတွက် အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်...ကဲ..ဒီတော့ အခုတင်ပေးမဲ့ လက်ထောက်ဗေဒင်လေးနဲ.ပဲ
ဒီလက်ထောက်ဗေဒင်လေးက အရမ်းမှန်ပါတယ်..ကိုယ့်ရဲ.စိတ်ထဲမှာ မေးမဲ့မေးခွန်းကိုသာ ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ.မေးပါ..
ဒီနေရာလေးမှာ ကလစ်ပြီး ဗေဒင်မေးကြည့်ပေတော့....ပျော်ရွှင်ပါစေ..
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 00:11 1 comment:
( လာမဲ့ 11.07.2013 မှာ ကိုသားကြီးကွယ်လွန်သွားတာ ၆နှစ်ပြည့်ပါပြီ..
မူအရာလေးတွေက online မင်းသားတို.ပရိသတ်တွေရဲ.ရင်ထဲမှာ အခု
ဖြစ်အောင် ဒီ ထွန်းလင်းခွင့်ပေးပါဆိုတဲ့ သီချင်းလေးတွေကို ပို.စ်အဖြစ်တင်ပေးလိုက်တာပါ...
ကိုသားကြီး ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ... )
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 20:02 No comments:
itag mp3 editor apk
သူငယ်ချင်းတို.ရေ .... ဒါလေးကတော့ online မင်းသားရဲ.ပထမဦး
ဆုံး မြန်မာလို ဘာသာပြန်ထားတဲ့ apk လေးပါ..ပြီးတော့ ဒီ apk
လေးကို online အရမ်း crazy ဖြစ်တဲ့ မေသက်ခိုင်အတွက် အမှတ်
တရ အဖြစ်ပေးဖို. ရည်ရွယ်ထားတာပါ.. apk လေးကို install လုပ်
ပြီးသွားရင် အကြောင်းအရာ ဆိုတဲ့ နေရာလေးမှာ တွေ.ရပါလိမ့်
မယ်... ဒီ apk လေးကိုဘယ်လို
သုံးရသလဲဆိုရင်...ဖုန်းထဲက mp3သီချင်းလေးတွေထဲမှာ မိမိပုံ ဒါ
မှမဟုတ် မိမိကြိုက်တဲ့ ပုံလေးတွေကို ထည့်လို.ရပါတယ်...နောက်
ပြီး သီချင်းရဲ.အဆိုတော်နာမည် ..အယ်လ်ဘမ်ကအစပေါ့ အကုန်
မေ့နေသေးတယ်.. ဒီ apk လေးဟာ မူရင်း itag editor 1.6 ကို
အခြေခံပြီး ဘာသာပြန်ဆိုပေးထားတာဖြစ်လို. မူရင်း tag editor 1.6 ရှိသူများက ပြန်လည် uninstall လုပ်ပြီးမှ ဒီ apk လေးကို install
လုပ်ပေးကြပါနော်...ကဲ..မေသက်အတွက် online ရဲ.အမှတ်တရ apk လေးကို သူငယ်ချင်းတို.လည်း အားပေးလိုက်ပါဦး.....
ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာလေးမှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ....ပျော်ရွှင်ကြပါစေ....
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 20:24 No comments:
၁၂ရာသီ ဟောစတမ်း apk
ဒါလေးကတော့ ၁၂ ရာသီ ဗေဒင်ဟောစတမ်းလေးပါ...fb page တစ်ခုကတွေလို. online ပြန်လည်မျှဝေပေးတာပါ...သူငယ်ချင်း
တို.ရဲ.ဖုန်းထဲမှာ မြန်မာဖောင့်မရှိလည်း မြင်ရတဲ့ apk လေးပါ...
လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာလေးမှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ...
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 19:28 No comments:
speed laucher pro 1.3
screen lock လှလှလေးကို ကြိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် speed laucher လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
သူငယ်ချင်းတွေ အကြိုက်တွေ.မယ်လို.လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်...ဖုန်း screen လေးပေါ်မှာ ပုံလေးတွေ app တွေ အားလုံး မိမိတို.ကြိုက်သလို တင်လို.ရပါတယ်...
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 01:52 No comments:
စိုင်းစိုင်းကို crazy ဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ဒိတ်ဒိတ်ကြဲကို တင်ပေးလိုက်တယ်နော်....
သူချင်းတွေအားလုံး အလန်းတွေကြီးပဲ...online ကတော့ တစ်ကိုယ်တော် valentine သီချင်းလေးကို
လိုချင်တယ်ဆိုရင် ဒီနေရာလေးမှာ ဒေါင်းလိုက်နော်....
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 01:10 No comments: